Home Wararka Kulankii loo balansanaa ee Saciid Deni & Isimada Gobolka Bari oo maanta...
Kulankii loo balansanaa ee Saciid Deni & Isimada Gobolka Bari oo maanta la filayo in uu qabsoomo
Isimada Gobolka Bari oo uu hoggaaminayo Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa maanta marti qaad rasmiya u fidiyay Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ay weheliyaan Guddoonka Baarlamanka iyo mas’uuliyiin kale.
Isimada ayaa sida la xaqiijiyay Madaxweynaha ku casumay Kulan Qada sharaf ah oo lagu qaban doono magaalada Boosaaso islamarkaana looga hadli doono Xaaladda Boosaaso gaar ahaanna Khilaafkii PSF.
Kulanka ayaa ku soo beegmay maalin kadib markii Madaxweynuhu codsaday in uu la kulmo Isimada Dhaqanka Gobolka Bari ee saxiixay Go’aankii xallinta Khilaafkii ka dhashay Hay’adda PSF.
Previous articleSomaliyey Yaa Na Qarxiya? Yaa iska leh Masuuliyadda Ammaanka?
Next articleGuddigii Doorashada HF oo ka hadlay cabashada doorashada reer Banaadiriga
Odoyaasha Hawiye oo taageeray go’aanka RW Rooble ee lagu ceyriyay Fahad